VaTsvangirai Vokurudzira Pasi Rose Kuti Rione Kuti Sarudzo Dzichange Dzakachena
Kurume 19, 2012
Mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri werimwe bato reMDC, VaMorgan Tsvangirai, vanoti pasi rose rinofanirwa kuona kuti muZimbabwe maitwa sarudzo dzakachena uye kurambidza mutungamiri wenyika, uye vari mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, kubira zvakare musarudzo dzichaitwa munyika.
VaTsvangirai, avo vari kuLondon kumusangano wezvemabhizimusi muAfrica, vakaudza bepanhau reLondon Times kuti nyika dzepasi rose dzinofanirwa kuona kuti zvinoda kuzadziswa zvose sarudzo dzisati dzaitwa, zvatevedzerwa, kuitira kuti munyika mugoitwa sarudzo dzakachena, uye senzira yekupedza matambudziko akatarisana nenyika.
Vanotiwo Zanu PF haizofi yakabvuma kupinda musarudzo isina zvimwe zvayakaronga.
VaTsvangirai vanoti kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nemitemo inotysidzira vemabhizimusi vekunze, vanoda kutanga mabhizimusi munyika vanogona kuwana goho rakanaka kana vakatanga mabhizimusi muZimbabwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro paUniversity of Westminster, kuLondon, VaPedzisai Ruhanya, vanoti maonero avo ndeekuti Zanu PF ichashandisa dzimwe nzaira dzakaita sekuburitsa zvinenge zvabuda musarudzo zvekunyepa.